Bụ Bitcoin a Project nke US Intelligence ? - Blockchain News
The ele ihe anya si Natalya Kaspersky: Bitcoin bụ a Project nke US Intelligence
InfoWatch ahụ n'ozuzu director na Kaspersky ụlọ nyocha nke ngalaba-nchoputa, Natalya Kaspersky, na-ekwu okwu na ITMO St.Petersburg National Research University of Information Technologies, Arụzi na Optics on January 18 aha ya bụ bitcoin mmepe nke US ọgụgụ isi ọrụ. Kasperskaya kwuru na mahadum dị ka akụkụ nke oghere ememe nke ITMO-InfoWatch ọzụzụ center. Ya ngosi e tinyeworo ọmụma agha na digital ọbụbụeze.
“Bitcoin bụ mmepe nke American ọgụgụ isi ọrụ na ebumnuche nke na ngwa ngwa akwado ọgụgụ isi ọrụ na United States, Britain na Canada na mba dị iche iche. “privatized”, dị ka Internet, GPS, TOR. N'ezie – na “dollar 2.0″. The akara nke ọnụego mgbanwe bụ nke dị n'aka ndị nwe mgbanwe.” – site na ngosi nke Natalia Kaspersky
Site facebook of Natalya Kaspersky 19 January 2018
Taa m natara a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-arịọ na ndi oru nta akuko na isiokwu nke m ụnyaahụ okwu na ITMO na nkwupụta bitcoin. M chọrọ dokwuo m ọnọdụ a nke.
1. Na ngosi, M kọrọ m si ele ihe anya. The eziokwu na bitcoin bụ nnoo a agha development bụghị a malitere izi ozizi, ma otu n'ime ndị kasị puru nsụgharị na nwere ikike ndụ, ma ọ bụrụ na naanị n'ihi na ọ dabeere ọ bụghị naanị na a maara nke ọma eziokwu, ma a na-egosi na ọtụtụ ndị ọkachamara na ubi nke infobase nchekwa. Ma m nchegbu banyere nke a, ma olee otú ha na-akọwa ihe m kwuru, efu si na ha putakarisiri.
2. All ndị na-ajụ m taa nwere mmasị bụ onye ọ bụ. M n'aka na nke a abụghị ihe kasị mkpa. Ọmụmaatụ, na Internet mbụ mepụtara site na US agha n'okpuru ha onwe ha mgbaru ọsọ na nzube. Na naanị mgbe e mesịrị ọ na-azụmahịa, na taa ụwa dum na-eji Internet na ọrụ dabere na ya. N'otu oge ahụ, na Internet mere ka a otutu egwu, nke anyị na-ugbu a na-agbalị ike sterilaiz.
3. Ugbu a banyere bitcoin. Ozioma nke a technology na-ekwu kwa ụbọchị banyere otú ngwa ngwa N'ezie nke bitcoin na-eto eto na otú ngwa ngwa, ọ ga-mma na ya. M na-atụle bitcoin, ka ọ bụla ọzọ technology, si ele ihe anya nke nchekwa nke ya iji na mba. Ọ bụrụ na ị tụnyere bitcoin ọ bụla ọzọ akwụkwọ ego, ọmụmaatụ, ndị dollar, mgbe e nwere atọ ọdịiche ndị doro anya.
a. E nweghị-achịkwa omume nke ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ azụmahịa. Bitcoin nwere ike ịkwụ ụgwọ (na-akwụ maka) machibidoro ọrụ, dị ka ọgwụ ọjọọ eme ihe ma ọ bụ na-agba akwụna, pedophilia ma ọ bụ igbu ọchụ. Na a na-adịghị achịkwa ma na usoro.
b. Bitcoin bụ isiokwu ịchịkwa ma ọ bụ iwu. Ọ na-adịghị na-echebe n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na a kaadị-akpa Ezuru, mgbe ebe na-agba ọsọ? Na onye na-achọ nchedo?
c. The na-eri nke bitcoin bụ kpam kpam ada na yiri ego pyramid. n'ezie, ikpeazụ dobe na-eri nke bitcoin esesịn mere a amalitekwa egwu n'etiti speculators.
N'ihi nke a, M na-adịghị tụlee bitcoin bụ a mma technology maka anụ ụlọ were. M mara na nkwupụta a anaghị emetụta na nkà na ụzụ nke igbochi, na nke ya wuru. Anyị na-adịkarị mkpa ka nlezianya tụlee ihe niile dị otú ahụ teknụzụ, ịtụle ihe ndị dị ize ndụ ma egwu n'ihu ewebata ha n'ime ezigbo aku na uba.
Previous Post:Mkpụrụ ego igwekota